बग विभिन्न देशहरूमा फरक भनिन्छ, तर आफ्नो नाममा सधैं एउटा सानो कीरा को मान्छे को लागि एक गहिरो आदर मार्फत आउँछ। , र पनि रूस मा "सूर्य" र, बाटो द्वारा फ्रान्स - - इङ्गल्याण्ड मा भनिएको छ युक्रेनमा "महिला-कीरा" "कीरा"। किन गाई? शायद, किनभने बग डरा गर्दा जोइन्टहरूमा खुट्टा hemolymph, समान उपस्थिति मा (तर स्वाद!) दूध whitish पदार्थ को विशेषताहरू। र परमेश्वरको किनभने यो हाम्रो बगीचहरुमा, दाखबारी र तरकारी उद्यानमा ल्याउँछ भन्ने पनि अत्यन्तै लाभ को उनको भनिन्छ। के तपाईं कहिल्यै ladybugs खान के अचम्म लाग्छ छ?
यहाँ यो बिस्तारै घाँस को एक ब्लेड मा creeping छ: रातो, आधा बलमा चित्रित भने, यो पखेटा मा सात कालो डट्स संग ... रोक्नुहोस्! वास्तवमा, ladybirds सबै दुनिया भर वहाँ बारे चार र एक हजार आधा प्रजाति छन्। र तिनीहरूले मात्र सात-भेट्यो रातो र पहेंलो र सेतो, कालो, सुन्तला छैनन्। उनीहरू त्यहाँ कम्तिमा केही वनस्पति हो जहाँ सबै महादेशमा, फेला छन्। त्यहाँ Meadows र क्षेत्र कीरा परमेश्वर, कि रूखहरू बसोबास गर्ने एक, र जलीय बिरुवाहरु बस्न रुचि कि पनि एक हो। तर "suns" को सम्पूर्ण विशाल संसारमा को खाना प्राथमिकताहरू लगभग उस्तै - यो नरम कीराहरू छ।
त्यहाँ छन् को पाठ्यक्रम, खराब "सूर्य", र एक तातो गर्मी दिन सामान्य लेडीबर्ड रसदार पात चबाने, तिर्खा मेट्न averse छैन। तर, यस्तो क्षति बग किसान ल्याउँछ कि लाभ संग छैन तुलना गर्न सकिन्छ। चालित कीरा भन्दा ट्रयाक गर्न, तपाईं एक म्याग्निफाइङ्ग ग्लास आर्म गर्न आवश्यक छ। विश्वास गर्न गाह्रो छ कि यो प्यारा बग - भयानक र voracious predator, किनभने उनी र आन्दोलन को गति सानो छ, र जस्तै बन्दुक, को जफती उदाहरणका लागि, mantises, कुनै। तर "सूर्य" र यो आवश्यक छैन, यसको उत्पादन अझै पनि ढिलो र पूर्ण defenseless छ किनभने छ।
को ladybugs खान? आफ्नो मुख्य आहार - लाईकीराको र यसको लार्वा। "सूर्य" र मात्रा कीराहरू, whiteflies, माकुरा कण, साना लाभ्रेकीरालाई, मात्रा कीराहरू, herbivorous त्रुटिहरू बाट कम छैन को लार्वा कोलोराडो आलु beetles। यो कीरा असामान्य भोक evinces गर्दा: प्रति दिन एक बग 150-200 लाईकीराको वयस्क वा लार्वा 300-400 को खपत। यो अथक predator पनि जरा मा परजीवी को लाईकीराको पुग्न जमीन खन्न सक्नुहुन्छ। voracity र शिकार खोजी गर्न क्षमता - - आफ्नो प्रेम र अनुभवी किसान यो गुण लागि। पहिले, को तलहटी बस्ने किसान, जाडो को अन्त मा हिमाल मा wintering ladybugs को खोज मा पठाइयो, बैग तिनीहरूलाई सङ्कलन र जब सूर्य prigreet, आफ्नै भूमि मा जारी। सोभियत त्रुटिहरू मा विमान-मकै तिनीहरूलाई गिर, सामूहिक खेत क्षेत्रहरू र दाखबारी मा "sprayed"। दुर्भाग्यवश, यो अभ्यास भूल छ, र रसायन वा GMOs प्रयोग किरा नियन्त्रण हुनुको।
को ladybugs को हिउँदमा खान? पहिलो रात frosts यो प्रवासी कीराहरूको हिमालहरू गर्न स्थानान्तरण गर्न थाल्छन्। त्यहाँ यो चट्टानको को चर्किएको र प्रायजसो खोंच मा ढोंगी। आफ्नो wintering स्थानहरू मा तिनीहरूले चट्टानको रातो ढाँचा कवर कि धेरै उड गर्न। कहिलेकाहीं एक ठाउँमा यसलाई धेरै लाख नमूनों गर्न accumulates। नजिक चौथाई, तर पागल छैन मा: साना भट्ठा मा cluttered अधिक त्रुटिहरू, को भीषण पहाड चिसो बच्न अधिक संभावना। बित्तिकै सूर्य ठूलो पत्थर न्यानो सुरु रूपमा, साना "सूर्य" सीतनिद्रा देखि जगाउन र बाहिर उड। एक जवान घाँस overfed एक सानो, त्रुटिहरू आफ्नो अन्डा सम्म लाईकीराको को ठूलो बस्ती बाट बल्लतल्ल hatched सन्तान जीविका प्रदान गर्न राख्नु। अन्डा को नम्बर आमाको आहार मा निर्भर गर्दछ। को क्लच दुई सय चार सय अन्डा हो।
तिनीहरूलाई को 5-8 दिन पछि सानो लार्वा देखिन्छन्। बीस दिन बारेमा रहन्छ जो मेरो बाल्यकाल, मा फिड ladybugs? अन्डा, लार्वा वा लाईकीराको वयस्क - यो जीव यसको मुख्य खाना पाता रूपमा पहिलो आसन्न अन्डा, जो कुनै एक hatched छ यस्तो समय सम्म पोषक मा शेयर। र जवान "सूर्य" को लागि आफ्नो खोज मा धेरै रोगी र methodical छ - वयस्क राम्रो खाना आपूर्ति स्थानहरु उड गर्न तिनीहरूले पखेटा छैन, पछि सबै र तिनीहरू नथाकीकन, मीटर द्वारा मीटर, स्पेस तिनीहरूलाई वरिपरि निरीक्षण।
वैज्ञानिक rationality को प्रकार: परिभाषा। वैज्ञानिक क्रान्तिको
हरियो स्पाइडर। के त्यहाँ हरियो spiders को प्रकार?
Socionics - यो ... Socionics: तालिका सम्बन्ध
सिद्धान्त को प्रकार। गणितीय सिद्धान्त। वैज्ञानिक सिद्धान्त
पेशाको साथमा रोग रोगको गम्भीर चिन्ह हो
तपाईंको आफ्नै हातमा कसरी सीढी बनाउन र यसलाई विचार गर्न आवश्यक छ कि
वसन्त लुगा। प्रेमको मौसम!